Abaphathi baseMelika Bonakele ... | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 20, 2005 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Abaphathi baseMelika bayachithwa. Abanye bangama brats.
Cabanga ukuphatha esiqhingini. Isiqhingi sakho sinemithombo yabantu elinganiselwe, bekude namahora ukusuka kunoma yini futhi ukhulume ulimi oluhlukile. Ukuheha abasebenzi esiqhingini sakho kunzima ngenxa yolimi lwendabuko nesiqhingi. Lesi siqhingi asikho empumalanga noma eCaribbean, kuyabanda futhi kumanzi izinyanga ezithile kuphela kunikela ngamahora emini. Ukukhula, abasebenzi bakho bafundiswe ukukhuluma ezinye izilimi ezimbili ezihlukile njengoba ulimi lwakho lwaziwa kancane ngaphandle kwesiqhingi sakho.
Njengomphathi nelungu lesiqhingi, kungumsebenzi wakho ukuhambisa abasebenzi bakho ezikhundleni lapho bengaphumelela khona. Kufanele usebenze kanzima ukugcina abasebenzi; ngoba, noma kuyikhaya labo, bangashiya lesi siqhingi noma nini lapho bengathanda ukulandela amanye amathuba. Kufanele utshale imali eningi kubasebenzi bakho kumholo nangezinsizakusebenza. Umsebenzi ngamunye uqala ngamaviki ama-5 eholide ngonyaka. Ungahle ungakwazi ukukhuphula abantu ngokushesha ngoba inzuzo yabasebenzi nentukuthelo kungangcwaba ibhizinisi lakho.
Lesi siqhingi yi-Iceland. Idolobha yiReykjavik. Izwe elihehayo. Abantu bakhona bacebile ngamasiko, umlando, futhi banesiko elinempilo nelicebe kunawo wonke emhlabeni. Ukudoba nezokuvakasha yizimboni eziphambili e-Iceland. Banokudla kwasolwandle okuhle kakhulu emhlabeni. Lesi siqhingi sinezinto eziningi ezithakazelisayo zokwakheka komhlaba kusuka ezinguzungeni zeqhwa, amagiza, kuya emasimini odaka.
Inkampani yami ingithumele e-Iceland kuleli sonto ukuyosiza elinye lamakhasimende ethu. Kusukela ngesikhathi sifika, besishaqekile. Isiko lenhlangano, ubuchwepheshe nokuzinikela kwabasebenzi kwakuhluke kakhulu kunanoma iyiphi inkampani yaseMelika engake ngasebenza nayo. Iqiniso ngukuthi, ngicabanga ukuthi sonakele.
EMelika, uma ungasithandi isisebenzi sakho ungavele umxoshe, umcele ahambe, noma akwenze ungakhululeki ngokwanele ukuthi ahambe. Uma zingakhiqizi, awudingi ukufaka izinsizakusebenza ukuze uthole entsha. Ukukhiqiza kwethu kulesi sizwe kuyaziwa emhlabeni wonke kepha hhayi ngenxa yabaphathi bethu abakhulu. Kungenxa yomthombo omkhulu wabantu esinabo. Kusho ukuthi asidingi ukuphatha. Asidingi ukuhola. Asikubheki ukuhlala isikhathi eside kwenkampani njengempahla imvamisa lapho isisebenzi sinenkampani isikhathi eside; sibabhekise ebuthakathakeni babo.
Iklayenti esilivakashele liyibhizinisi elinenzuzo embonini yamazwe omhlaba ehamba cishe yonke indawo. Babhekene nezinselelo eziningi kunathi. Eqinisweni, izimbangi zabo ezweni lethu zingabhanga njengengxenye yecebo labo lebhizinisi! Babheka ikhwalithi, kuyilapho izimbangi zabo zigxila entengo. Banamasu wesikhathi eside, kuyilapho izimbangi zabo zikhathazekile ngentengo yesitoko yanamuhla. Indlela yabo yokuziphilisa iyakudinga, futhi bayakhulula.
Kuzo zonke izindawo, amasiko abo kanye nobunzima bemvelo yabo kufuna ukuthi babe ngabakhangisi abangcono, osomabhizinisi abangcono, futhi ngaphezu kwakho konke, abaphathi abangcono. Ngenkathi sihleli emihlanganweni yethu nenqwaba yabasebenzi, asikwazanga ukusho ukuthi obani ababengaphambili nokuthi obani ababengabaphathi abaphezulu - bonke babenolwazi, bezibophezele, bekhuluma futhi bezibandakanya.
Emsebenzini wami, ngihlangane nabaphathi aba-1 noma aba-2 abangahle bakwazi ukuncintisana kule ndawo. Ngokudabukisayo, izinkulungwane zabanye engisebenze nazo aziphathi ikhandlela. Uma ngikhuluma iqiniso, ngicabanga ukuthi ngingomunye wabakamuva…. Angiqiniseki ukuthi nami ngingaphumelela lapho.
Abaphathi bethu bonakele. Akudingeki ukuthi baphathe, abadingi ukuzivumelanisa nezimo zabo bamane bashintshe imvelo ukufihla ukungakwazi kwabo ukuhola. Kwamanye amabhizinisi, inzuzo yabasebenzi iyinzuzo ngoba ingagcina ikhokha phansi. Abanye bakholelwa ukuthi kushibhile ukuthola isisebenzi esisha kunokugcina umuntu onolwazi.
UNathan Myhrvold, owayenguSosayensi Oyinhloko, kwaMicrosoft uthe, 'Abathuthukisi abaphezulu be-software bakhiqiza kakhulu kunabasebenzisi abaphakathi kwesoftware hhayi nge-10X noma i-100X, noma i-1,000X, kepha i-10,000X.â ??? Ngiqinisekile ukuthi lesi sitatimende singaphindwa ezinhlanganweni eziningi. Iqiniso ngukuthi ukuqashwa okuhle akubalulekile Okuningi kunezinye izisebenzi, zibalulekile ngokucacile ngaphezulu.
Njengoba umhlaba wethu uqhubeka nokuhlangana, isiqhingi sethu siya ngokuya sincipha. IMelika manje isiba yikhasimende lezimakethe zomhlaba wonke futhi ngeke siphumelele ngaphandle kokuthi abaphathi bethu sibaphendule. Okufuna ukuthi i-Iceland ikwenze akukude kakhulu esikhathini esizayo ezweni lethu. Abasebenzi bethu nabaphathi bethu abalungile bazothathwa yizinkampani ezazisa ukubaluleka kwazo. Abaphathi ababi bazogibela izinkampani zabo ezimbi bangene emhlabathini.
Tags: Americaglobalumnotho wembulunga yonkeicelandInternationalukuphathwaumphathiizwe